တည်ဆောက်နိုင်သော LEGO Harry Potter သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လာမည်လား
23 / 03 / 2021 24 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1496 Views စာ0မှတ်ချက် 43179 မစ်ကီမောက်စ်နှင့်မီနီမောက်စ်တည်ဆောက်နိုင်သောအက္ခရာများ, Disney, Eurobricks များ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione granger, Instagram ကို, Lego, Lego Disney, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego ကောလာဟလများ, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group
မင်းရဲ့ကံမကောင်းတဲ့သတင်းကဒီမှာပါ။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရတဲ့ဖြစ်နိုင်သည် 43179 Mickey Mouse & Minnie Mouse.
ကိုယ့်အကြောင်းကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သူများသည် buildable ဇာတ်ကောင် Disney's အထင်ကရက cartoon ကြွက်များ (သင်မေးသူပေါ် မူတည်၍)၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိပြီးသားဖြစ်တုန်း ၇၅၉၇၉ Hedwig (နှင့်က တည်ဆောက်နိုင်သော Fawkes ယခုနှစ်တွင်လည်းလာသည်) 76393 သည်ကြီးမား။ တည်ဆောက်နိုင်သောဗားရှင်းများအားပေးအပ်ရန်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမှော်အတတ်နှင့်ပတ်သက်သောကျန်ရှိနေသေးသောကျန်များအားလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်ဟု… ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Hermione Granger ။
၎င်းသည် Instagram သုံးစွဲသူ၏အဆိုအရဖြစ်သည် 1414falconfan, သူကကောလာဟလ Eurobricks အသုံးပြုသူ lego_guyon02 မှအစပြုသည်ဟုသတင်းပို့သည်။ ဒီပစ္စည်းကိုဒေါ်လာ ၁၁၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၆၀ ထက်နည်းသည် 43179 Mickey Mouse & Minnie Mouseဒါကြောင့်အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမြင့်မားစွာမထားဖို့အကြံကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
တကယ်တော့ဒီကောလာဟလကအဖြေတွေထက်မေးခွန်းတွေပိုပေးရုံပဲ။ အဘယ်ကြောင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဟယ်ရီ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဟယ်ရီနှင့်အခြားဇာတ်ကောင်တစ်လုံးတည်းနှင့်သာတွဲနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် Voldemort မဟုတ်ပေလော။ ဤအရာများသည်သူတို့၏ရုပ်ထုများကိုယူဆောင်လာသည့်ရုပ်ထုကြီးများထက်ပိုများသောနေရာများသို့ရောက်သွားနိုင်သည် Star Wars နှင့် Marvelသံခမောက်လုံး
တွေ့မြင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာအားလုံး - vera ကဲ့သို့ပင်city ယခုအချိန်တွင်gဝံဂေလိတရားအဖြစ်မယူမှတ်သင့်သောဤကောလာဟလ၏။ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပါမည် Lego အုပ်စုသည် ၇၆၃၉၃ တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ's ကိုလည်း - ကောလာဟလ အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, ကြီးမား wizard စစ်တုရင် set ကို နှင့် ထွန်းပြက္ခဒိန်.
အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာနောက်တစ်ခုကိုဆိုလိုသည် ပိုမိုစျေးကြီးတဲ့ကောလာဟလများအစုံ နောက်တဖန်အဘို့အ Gringotts-shaped တိုးချဲ့ထက်အခြားအရာတစ်ခုခုအားဖြင့်ပြည့်စုံကြလိမ့်မည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley.
← Lego Creator Expert 10295 Porsche 911 ပြန်လည်သုံးသပ်
တည်ဆောက်နိုင်သော LEGO Harry Potter Fawkes သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနိုင်သည် →